Iigloves zeFreezer → Iivenkile ezibandayo zokugcina i-P & M
Iiglavu zeFreezer ziyinxalenye ebaluleke kakhulu yezixhobo zeefriji kunye neevenkile ezibandayo. Izandla zihlala ziveliswa ekunxibelelaneni ngqo neempahla kunye nezixhobo. Zisoloko zixhomekeke kwiqabaka ngenxa yendawo evele kunye nezenzo zamaqondo obushushu asezantsi, umoya uhlala usenzeka ngokufuma okuphezulu. I-Frostbite ihlala iqala ngokubomvu kolusu, kuba ukujikeleza kwegazi kuyakhawuleziswa ukufudumeza amalungu apholileyo. Iimpawu ezilandelayo ziintlungu, ukurhawuzelela, kunye nemvakalelo yokudumba kwezandla. Iqondo leqabaka lixhomekeke kwixesha nakwiimeko,
apho ulusu lwabonakaliswa ziziphumo ezibi zobushushu obuphantsi. Iiglavu zezona zikhusela ngokugqibeleleyo kumaqondo obushushu asezantsi, kwaye zikuvumela ukuba wenze imisebenzi yakho ngokukhululekileyo. Iziqhano isikhenkcezisi iimveliso ezikumgangatho ophezulu zikuvumela ukuba ukhusele izandla zakho kwiqabaka, yiyo loo nto ivenkile yethu inika kuphela iimveliso ezikumgangatho ophezulu ezivela kubavelisi abacetyiswayo.
Iiglavu ZOMGANGATHO WOKUGQIBELA WOKUGQIBELA iiglavu zokugcina ingqele kunye nokugcina ukubanda
Iiglavu zezikhenkcezisi kunye namagumbi abandayo TG2 XTREME COLDSTORE Iiglavu
Ukhetho olubanzi lweiglavu zobuchwephesha lwenza ukuba abathengi bakulungele ukuthenga iimveliso kungekuphela kweiglavu, kodwa kwanoluhlu lonke lwempahla yeefriji kunye neevenkile ezibandayo, ukukhetha kuzo ibhulukhwe, iibhatyi okanye izihlangu. Iiglavu zabaqhubi zoboya ziyimveliso ehlangabezana nemigangatho ye-EN388. Iiglavu zeorenji zeTG1 Pro Coldstore ziyimveliso enelinen ye-Thinsulate. Imodeli yeglavu yegolide yeArctic yeColdstore okanye iigloves zeFreyiza ze-Eisbaer ezihlangabezana neemfuno ze-EN 511 / EN 388-ezi mveliso zikhethiweyo kunikezelo lwethu. Zonke iintlobo zeiglavu zichaziwe ngokweenkcukacha ukwenza ukhetho lube lula kangangoko kunokwenzeka.
Iiglavu zabaqhubi zoboya ezishushu
Amaxabiso anomtsalane kunye nomgangatho ophezulu
Inkampani yethu ibonelela ngokuqhubekeka kwezityalo, indawo zokugcina, iivenkile ezibandayo, iinkampani zamalungiselelo, kwaye oku kuyivelisa iiodolo ezinkulu iimveliso. Siyabulela koku, sikwazile ukuzilolonga izaphulelo ezinomtsalane kubavelisi bethu, okukhokelela kumaxabiso okhuphiswano kubathengi. Ukongeza umgangatho ophezulu Iimveliso zenza abathengi abaninzi banelisekile ukuba babuyele kuthi, kwaye oku kusivumela ukuba sigcine amaxabiso okuthenga kwiikontraki zethu kwinqanaba eliphantsi.
Uninzi lwezambatho kunye namalaphu, sinokumakisha ngayo nayiphi na imizobo, senza ilogo ngokusebenzisa indlela isambatho sekhompyuter okanye ukushicilelwa kwesikrini. Sineyethu ipaki yomatshini, esivumela ukuba silandele inkqubo yokumakisha kuwo onke amabakala.
Iiglavu zezikhenkcezisi kunye namagumbi abandayo TG1 PRO COLDSTORE
isitya seevenkile ezibandayo kunye nezikhenkcisiimpahla yokukhuselaiiglavu zefrijiIiglavu zecoldstoreiiglavu zamaqondo obushushu asezantsiIziqhano zeGolide eziQiniswayoIigloves ezinamahhalaIiglavu zoboyaIiglavu zokugcina ezibandayoiiglavu ezishushu